ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူနှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း ၂ !!! - JAPO Japanese News
ကြာ 11 Jun 2020, 14:33 ညနေ
* Su နှင့် ပထမပိုင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုတော့ အောက်ဖော်ပြပါ link မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Su လို့ခေါ်တဲ့သူမက အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်းအပြင် ဂျပန်မှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတို့နှင့် ပတ်သတ်တဲ့ အမျိုးမျိုးသောကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ သူမပြောပြတဲ့ ( Okayama တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဘွဲ့လွန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝ ) နှင့် ( နိုင်ငံရပ်ခြားမှာပညာသင်ကြားရတဲ့အခက်အခဲ ) အစရှိတဲ့ အကြောင်းတွေကို စာဖတ်သူတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Su က ပညာသင်ဆုကိုရရှိပြီး ပညာတော်သင်ကျောင်းသားအဖြစ် ပြည်ပမှာ ပညာလေ့လာလျက်ရှိပါတယ်။
နေထိုင်တာကတော့ အဆောင်အခန်းငှားရမ်းပြီး တစ်ယောက်တည်းနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။
Su ဂျပန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဂျပန်စာလေ့လာခြင်း နှင့် ဘွဲ့လွန်တက္ကသိုလ်မှာ သုတေသန အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ တစ်နှစ်ခွဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသင်တန်းကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသင်တန်း ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဘွဲ့လွန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာ နှစ်နှစ်လေ့လာပါတယ်။
Su ဟာ ဂျပန်စာကို လုံးဝနားမလည်ဘဲ ဂျပန်ကိုရောက်လာခဲ့ပုံရပြီး
သူမ ဟာ JLPT N3 ကို တစ်နှစ်အတွင်းမှာ အမှတ်ပြည့် နီးပါး နဲ့ အောင်မြင်စွာဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် !
သူ အတော်လေးကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို မြင်နိုင်ပါတယ်။
Su က တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့အပြင်၊ မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းများတွင် အင်္ဂလိပ်စာ ကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် သင်ကြားပေးတာမျိုးတွေ၊
ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေး အဖွဲ့၀င် အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခြင်း ကဲ့သို့သော အမျိုးမျိုးသော အရာတွေကိုလည်း စိန်ခေါ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် သူမသည် တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ရဲ့ နွေရာသီအားလပ်ရက်တွင်လည်း အိုင်တီကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်သင်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အသိဂျပန်လူမျိုးများကို မြန်မာဘာသာသင်ကြားပေးတဲ့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လည်း လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သုတေသနအပြင် အခြား အမျိုးမျိုးသော နယ်ပယ်မှာ လှုပ်ရှားမှုတွေ အများကြီးလုပ်နိုင်တာပဲနော်။ ဒါဟာ အရမ်းကျေနပ်အားကျစရာကောင်းပါတယ် !
၂။ ပြည်ပမှာ ပညာလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲများ
သူမက ဂျပန်စာ ကို လုံးဝမလေ့လာဘဲ ဂျပန်သို့လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် အစပိုင်းမှာ ဂျပန်စကားကိုနားမလည်လို့ အရမ်းကို စိတ်ညစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ထို့အပြင် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းမှ သင်ခန်းစာတွေက ဂျပန်ဘာသာဖြင့်သင်ကြားပေးသောကြောင့် နားလည်နိုင်ဖို့ ဆိုတာလည်း အလွန်ခက်ခဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်လျှော့ အရှုံးမပေးဘဲ ဂျပန်စာကို မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာရေးပြီး ဆက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းမှ ဂျပန်လူမျိုးများနှင့်လည်း စကားပြောဆိုလေ့ရှိပြီး စကားပြောအလေ့အကျင့်ကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် N3 ကိုတစ်နှစ်အကြာမှာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်သင်ဆင်းနေရတဲ့အချိန် ဂျပန်စာဘက်မှာလည်းရလဒ်ကိုကြေငြာနိုင်တဲ့အထိ ဂျပန်စာမှာတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး Su ရဲ့ဝါသနာကတော့ exercise လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပင်ပန်းတဲ့အချိန်နဲ့စိတ်ဖိစီးလာတဲ့အချိန်မှာ ပန်းခြံနဲ့အိမ်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြေးပြီးစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချလေ့ရှိပါတယ်။
တိုင်းတစ်ပါးမှာပညာသင်နေစဥ်အတွင်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေက ဖြစ်လေ့ရှိတတ်တဲ့အရာပါ။ ဒါကြောင့်လက်ရှိ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာကျောင်းတက်နေသူတွေအားလုံးလည်း မနှစ်မြို့ဘွယ်အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေခဲ့ရင် Su လိုပဲ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်လိုက်တာက ကောင်းပါတယ်။
၃။ ပြည်ပမှာပညာလာမသင်ခင် လုပ်ခဲ့သင့်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာ
အကယ်၍သာ ဂျပန်စာကို ဂျပန်မလာခင်ကသာ သင်ကြားမယ်ဆိုရင် ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေ ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ သူမ ကပြောပါတယ်။
ဂျပန်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားပညာသင်အများစုလည်း ဒါကိုခံစားရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မကတော့ Su က ဂျပန်စာမသင်ပဲသွားလို့သာ ဂျပန်မှာလေ့လာဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ပိုပြီး ကြိုးစားဖြစ်ခဲ့တယ် လို့ထင်မိပါတယ်။
( ဂျပန်စာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိဘူး. . . ) ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဂျပန်မှာပညာလာသင်ဖို့ကို တွေဝေလမ်းပျောက်နေတဲ့သူတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့
အရင်ဆုံး Challenge လုပ်ကြည့်လို့ရတာ ရှိပါတယ်နော် !
တကယ်တော့ Su ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးမှာ ဂျပန်လူမျိုးတွေသာရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း
ဂျပန်စာ တိုးတက်ဖို့ ပိုပြီး မြန်တာ လို့ ထင်ပါတယ်။
(Kamakura နဲ့ Syodoshima ကို ခရီးသွားတဲ့ အမှတ်တရ)
Su ရဲ့ ပြည်ပမှာ ပညာသင်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို သိလိုက်ရတော့ ဘယ်လိုလဲ ?
ပြည်ပမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ သူတွေအတွက် သူမရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကို သိရပြီး နှစ်သိမ့်မှု နဲ့ ခွန်အားတွေ ရစေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်ဘွဲ့လွန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာ အကြောင်းအရာများစွာလေ့လာပြီး နောင်အနာဂတ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ သူမကို ဆက်လက်ပြီး အား‌ပေးထောက်ပံ့ကြပါစို့နော် !